Samsung Galaxy i5500 iyo Samsung Galaxy i5800, laba Android cusub oo dheeri ah | Androidsis
Samsung Galaxy i5500 iyo Samsung Galaxy i5800, laba cusub oo cusub oo Android ah
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday laba terminaal cusub oo Android ah oo suuqa soo gali doona bisha July ee soo socota, waa Samsung Galaxy 3 i5800 iyo Samsung Galaxy 5 i5500 (sidoo kale loo yaqaan Corby),, Waxay u muuqataa in sumadda Galaxy-ka ay ku jiri doonto moodallo badan oo Samsung ah. The Samsung Galaxy 3 joogi doono suuqyada Yurub iyo Aasiya halka Samsung Galaxy 5 Waxay aadi doontaa suuqyada Yurub, Latin America, China, Australia, SEA, SWA iyo EMEA.
Iyagu waa laba terminaal-dhexdhexaad-hoose-dhexe ah oo loogu talo galay inay gaaraan isticmaaleyaal badan iyo ganacsi ballaaran, sidaa darteed waxaan ka rajeyneynaa qiime aad u tartan badan iyaga.
Marka laga hadlayo astaamaha Samsung Galaxy 3 i5800 Waxay leedahay shaashad 3,1-inji ah oo leh 240 × 400 pixels xallinta. 3 Kaamiro Mpx leh autofocus iyo xulashooyin fara badan oo kujira barnaamijka. Waxay leedahay isku xirnaanta Wi-Fi 802.11b / g / n, Bluetooth 3.0, USB 2.0, A-GPS, micro SD card slot, accelerometer iyo dhawaanshaha dareeraha. Waxay ku habboon tahay faylasha DivX / Xvid waxayna awood u leedahay inay ku duubto 15 fps oo leh xallinta 320 × 240. Waxay leedahay qalab raadiye FM ah oo leh RDS iyo 3,5 mm wax soo saar maqal ah.
La yimaado ah Nooca Android 2.1 iyo tan ku saabsan interface ka Samsung Touch Wiz 3.0 dabeecad. Batarigiisu waa 1.500 mAh kaas oo na hubinaya, sida ay soo saaruhu sheegeen, 15 saacadood oo la isticmaalo iyo 517 saacadood oo heegan ah.
Terminaalka kale ee maanta la soo bandhigay, ayaa Samsung Galaxy 5 i5500 Waxay ku imaan doontaa shaashad 2.8-inji ah iyo qaraar dhan 240 × 320 pixels. Kaamiradaadu waxay dhacdaa inay leedahay 2 Mpx oo leh iftiin LED ah. Sida ku dhowaad dhammaan boosteejooyinka qaybtaan, terminaalkani wuxuu leeyahay xiriir Wi-Fi ah 802.11 b / g, Bluetooth 2.1, USB 2.0, A-GPS, booska loogu talagalay kaararka micro SD. Waxay leedahay qalab raadiye FM ah oo leh RDS oo la mid ah kii hore iyo 3,5 mm wax soo saar maqal ah.
Android 2.1 leh interface TouchWiz 3.0 goobjoog ka ahaan doonaa Samsung Galaxy 5. Batariga ayaa kaliya ah 1.200 Mah, kaasoo na siinaya 387 daqiiqo oo wadahadal ah iyo 375 saacadood oo heeggan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy i5500 iyo Samsung Galaxy i5800, laba cusub oo cusub oo Android ah
Waxaan ka fiirsanayay helitaanka Galaxy S, laakiin markii aan arkay sida ay u baxayaan boosteejooyinka bidix iyo midig waxay xaqiijineysaa wixii aan ka baqay, in ay ka tagi doonaan iyadoo la ilaaway 2 bilood ka dib sida ay qof walba ku sameeyaan
Ma waxaan ahay qofka kaliya ee ka dheregsan HTC, Samsung iyo shirkadahan oo dhan oo maalin kasta sameeya terminal gazillion ah, halkii aan ka dhigi lahaa 2 ama 3 kuwa fiican oo aan awood u yeesho? Waxaan u maleynayaa in tani ay wax u dhimeyso Android, tan iyo markii ay ka tagto iyada oo aan la helin calaamado qeexan ... Waxaana jira dad badan oo aniga oo kale ah, u wareegi doona iPhone 4.
Laakiin haddii taleefannadan ay yihiin kuwo dhammaad ah oo loo yaqaan 'Marc', waxaa loogu talagalay nooc kale oo dhagaystayaal ah waana iska cadahay in aysan la socon karin xawaaraha cusbooneysiinta ee ah dhamaadka-dhamaadka-dhamaadka ah sida galaxy s.
Haa, laakiin wararka ka hor kani sidoo kale wuxuu ka hadlayaa Samsung kale, kanna waa mid heer sare ah. Waxaan heystaa Geesi waana ka dharagsan yahay waxa ay HTC nala sameysay: wali waxaan la joognaa 1.5 wixii ku xigta ee aan heli doonana waxay noqon doonaan 2.1, markii ay horeyba u joogeen 2.2 ... inta ka horeysana waxay sii daayeen kumanaan moodooyinka badan.
Waxaan u maleynayaa haddii qof sii daayo Android awood leh iyadoon nidaamka nidaamsaneyn ama waxna loo gogol xaadhin si loo cusbooneysiiyo (oo si fiican kor loogu qaado, dabcan) way guuleysan doonaan. Haddii kale, iska hubi Motorola Droid! In kasta oo hadda ay u muuqato in Motorola ay sidoo kale jiidanayso moodello badan oo nidaaminta loo habeeyay ...:
Fadlan xaqiiji in samsung galaxy 5 uu hogaamin doono flash, maxaa yeelay boggaga kale waxay dhahaan maya
Iga raali noqo maxaa yeelay waxaa jira Samsung GT-i5800 oo leh badhanka bartamaha laba jibbaaran iyo mid kale oo wareega wareega ah ????
Ku jawaab hahaha
Waxaan ubaahanahay buugga Samsung Galaxy 5 i5500 si aan u ogaado sida loo shaqeeyo .. fadlan i caawi
Hal su'aal .. Waxaan hayaa samsung galaxi i 5500 mana garanayo sida loogu xiro internetka shirkada, taas oo ah, adigoon isticmaalin wi fi iyo usb ...
Ku jawaab Coloradokapo22
Waa inaad gashaa goobaha halkaasna waxaad gashaa iskuxirayaasha waxaad galeysaa aagga wifi iyo barroosinka shabakadda waxaadna dhaqaajineysaa barroosinka halkaas sidoo kale waxay kuxirantahay sababta qaarna ay ugu muuqdaan barroosinka xarig ama wifi iyo waqti diyaar ah haddii ay tahay wificnfg wap wep key
Sony Ericsson Going, Android Walkman ayaa mar kale la arkay
ADW Launcher, beddel wejiga desktop-kaaga